मेलम्ची बाढी : घरमा फसेका राजु भन्छन् – म’र्छु भन्ने लागेको थियो, झन्न से’ना आएर बचायो ! | समाचार
June 17, 2021 NepstokLeaveaComment on मेलम्ची बाढी : घरमा फसेका राजु भन्छन् – म’र्छु भन्ने लागेको थियो, झन्न से’ना आएर बचायो !
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारलाई बाढीले बे’हा’ल तु’ल्याएको छ । मंगलबार इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारका करिब एकसय घर पूर्ण रुपमा डु’बा’नमा परेका छन् ।
घरको तीन तलासम्म ले’दोले डु’बे’को अवस्था छ भने सारा सामान छाडेर ज्या’न जो’गा’उनकै लागि नजिकैको विद्यालयमा आश्रय लिएका स्थानीयवासीका लागि गाँ’स, बा’स र कपासको समस्या ट’ड्का’रो भएको छ ।
स्थानीयवासी मच्छिन्द्र श्रेष्ठ बाढीले आफ्नो परिवारको उ’ठी’बा’स नै गराएको बताउँछन् । १० जनाको परिवार रहेका श्रेष्ठले ०७४ सालमा ऋण लिएर चार तले घर बनाएका थिए ।
मंगलबार ले’दोसहित आएको बा’ढीले उनको घर डु’बा’एको छ । ‘चार तले घरको एक तलामात्र देखिएको छ,’ रउनले भने, ‘तीन तला पु’रि’एको छ ।’ करिब ४० लाख खर्च गरेर बनाएको घरको ऋणसमेत तिर्न बाँ’की रहेको उनले सुनाए ।।।।
‘अब त खाने, बस्ने नै ठेगान भएन,’ उनले भने, ‘कसरी गु’जा’रा चल्छ होला ! केही सोच्नै सकेको छैन ।’ बाढी आउँदैछ भनेर हल्ला चल्न थालेपछि साँझ घर छाडेर आफूहरु सुरक्षित स्थानतिर गएकाले मा’नवी’य क्ष’ति हुन नपाएको उनले बताए ।
स्थानीयवासी नन्दाकुमारी श्रेष्ठ पनि बाढीले उ’ठी’बा’स लगाएको बताउँछिन् । उनले १० वर्षअघि जग्गा किनेर करिब ८ वर्षअघि घर बनाएको सुनाइन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही घरमा एउटा सानो होटल गरेर गु’जा’रा चलाउँदै आएका थियौं ।’
एउटा सुन्दर मेलम्ची बजार केहि समयमै बगर बनेपछि…(फोटो फिचर)